६ मंसिर, काठमाडौं । एकताको अटुट निरन्तरताका पक्षमा रहेका तिनै नेताहरूसँगको अन्तरक्रियाका आधारमा यहाँ उपायहरू सुझाइएको छ । अहिले भित्र अध्यक्ष ओलीको जवाफ तयार भइरहेको छ ।
बाहिर मेलमिलापका दौडधूप उत्तिकै चलिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा ती मुख्य दुई उपाय प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको छ–
महासचिव पौडेलले भनेझैं सचिवालय झगडाको मुख्य थलो हो । तर, नेकपाको लफडा पछिल्लो समय अल्पमतरबहुमत केन्द्रित छ । जुनसुकै कमिटीमा पनि यो रोग छिर्दैन भन्न सकिन्न । हुन पनि नेकपा पहिलाको संसद्जस्तै बन्न पुगेको छ । त्यतिबेला गठबन्धन मिलाएर सरकार बनाइन्थ्यो । चलुन्जेल चलाइन्थ्यो। नत्र ढल्थ्यो । सांसद किनिन्थ्यो । पार्टी फुटाइन्थ्यो । सकेको हथकन्डा अपनाएर अर्को सरकार बनाइन्थ्यो । त्यसको भविष्य गन्ती त्यही दिन सुरु हुन्थ्यो । नेकपा अहिले ठ्याक्कै त्यही हालतमा छ । यसमा कहिले कता अल्पमत, कहिले कता बहुमतको गणित चल्न थाल्यो । आफूलाई दर्बिलो बनाइराख्न सादा कागजमा हस्ताक्षर गराएर कायल बनाउनेदेखि आफैंले टिकट दिएर बनाएका सांसद किन्नेसम्मको अवस्था आइसक्यो । यसभन्दा दुर्गन्धित रूप के हुन्छ ?
दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाउन नसक्ने हो भने दोस्रो उपाय अपनाउन सकिन्छ– सबै भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने । त्यसमा एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने (वर्तमान दुई अध्यक्षबाहेक) शीर्ष नेतालाई संयोजक बनाउने। उदाहरणका लागि झलनाथ खनाल हुन सक्छन् । उनी पुनः अध्यक्ष बन्ने चाहनामा देखिँदैनन्। उनको खास गुट पनि छैन। यो उदाहरण मात्र हो, अरू जो कोही हुन सक्छन् ।
एकताका यतिका दिनसम्म आइपुग्दा गल्ती दुवै नेताबाट भए होलान् । अहम् दुवैमै होलान् । तर, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गल्ती थिएन । गल्ती त फेरि फुटाउँदा हुनेछ । दुवैले अलिकति अहम् त्याग्दा वा फराकिलो छाती बनाउँदा नेकपा जीवित रहन सक्छ । त्यसका लागि उत्तम समाधान माथिका ‘दुई उपाय’ हुन सक्छन् कि ? यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा अखण्ड भण्डारीले लेखेका छन् ।
मोटर मर्मत गर्न इनारमा पसेका दुईको मृत्यु, एक जनाको उपचार हुँदै